10 Most Famous Landmark To Visit | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Most Famous Landmark To Visit
Nguva yekuverenga: 9 maminitsi
Zvinoshamisa mukuvakwa, akapfuma munhoroondo, mu maguta akanaka kwazvo munyika, ari 10 inonyanya kuzivikanwa zviratidzo zvekushanyira nechitima izvo zvinofanirwa kunge zviri pane yako bhakiti mazita. Kubva kuEurope kuenda kuChina, kuburikidza negedhi rakakurumbira reBerlin, nekuGuta Rirambidzwa, heino sneak peek pane iyo mamaki ayo anokusiya iwe uchishamisika.
1. Iyo Eiffel Shongwe Paris
Izvo zvakaoma chaizvo kupotsa ichi chinoshamisa chiratidzo, 300 mamita akakwirira esimbi yesimbi. Kunyangwe uri kufamba muLe Marais, Mukadzi Wedu, kana Latin Quarter, ichi hombe icon yeParis ichave ichionekwa nguva dzese.
saka, kana iwe uri kuenda kuParis kekutanga, iwe uchanyatso shanyira Eiffel Tower masikati uye husiku kuti uone Eiffel ese akavhenekerwa. saka, iwe unofanirwa kuve wakagadzirira zvakanaka kushanya kwako uye uzive iyo nzira yakanakisa yekufamba kuenda kuEiffel Tower muParis, kana chero kupi kuEurope.
Nzira Yekusvika Kune Iyo Eiffel Shongwe Nechitima?
Zvakanakisa kuenda kuEiffel Tower nechitima. The zvifambiso system muParis inoshanda kwazvo uye inofara. Kufamba uchiyambuka arrondissements uye zviratidzo zvinonyanya nyore, uye Eiffel Tower nzvimbo yepakati muguta zvinoreva kuti yakanyatsobatana neFrance njanji.
Champ de Mars / Kuratidzira Eiffel ndicho chiteshi chepedyo chechitima, uye Eiffel Tower yakarurama 2 maminetsi ndichifamba kubva kuchiteshi. zvisinei, kuburuka kuchiteshi cheTrocadero kuchapa mamwe mashiripiti maonero eshongwe neSeine. Unogona kutora RER Mutsetse C kuenda kuEiffel Tower maminetsi mashoma, uye metro tikiti rerwendo rumwe i € 1.9.
2. Akakurumbira Makiaki Ekushanyira Nechitima: Iyo Huru Rusvingo rweChina
Chinzvimbo chikuru pasi rose chakagadzirwa nevanhu, iyo Great Wall yeChina yakatora 2000 makore ekuvaka. Iyo yekutanga kuvaka masvingo yakatanga kutanga kwezana ramakore rechinomwe, uye gare gare mamwe masvingo akawedzerwa kusimbisa uye kushandura Iyo Huru Rusvingo rweChina kuva imwe yeakakura uye anokanganisa pfungwa maseru pasi.
Sezvo iyo Great Wall yeChina yakakura kwazvo, unogona kuyemura kubva kune vakawanda nzvimbo mhiri kweChina, uye inogona kutora kusvika 175 mazuva ekuyambuka zvizere. zvisinei, nzvimbo yakanakisa yekuyemura iyo Great Wall yeChina ndeye Beijing, mafuro eBeijing, nemataundi akaita seBadaling. Kupedza, Iyo Great Wall yeChina saizi, nhoroondo yakakosha, uye kunze-kwe-ino-nyika dhizaini iite imwe ye 10 inonyanya kuzivikanwa zviratidzo zvekushanyira nechitima.
Nzira Yokusvika Nayo Kumadziro Akakura EChina Kubva Beijing?
Iwe unofanirwa kuenda kuHuoying Station nechitima chepasi kana kutora iyo Airport Express mutsara. Zvino kubva kuHuangtudian Railway Station tora iyo S2 chitima kuenda kuBadaling Railway Station. Iwe uchaona iko kunopinda kuGreat Wall pamaminetsi makumi maviri ekufamba kubva kuchiteshi chechitima.
3. Akakurumbira Makiaki Ekushanyira Nechitima: Sistine Chapel Vatican Guta
Fresco yakanaka yaMichelangelo yave ichishamisa vashanyi kwemazera. Iyo Sistine Chapel mukati Guta Vhatikeni zvakanak kushanyira neChishanu manheru nehusiku muzhizha apo inenge isina kuwanda vanhu. Mifananidzo mikuru pasi rose inowanikwa kuburikidza nemuseum yeVatican, uye haufanire kubhuka nguva yekupinda.
Sistine Chapel inonzi zita rePope wechitanhatu, uyo akaivaka muzana ramakore rechi15. saka, iyo Frescoes inoshongedza siringi muSistine Chapel inoratidza ngano kubva mubhuku raGenesisi. Mune anoshamisa pendi kurohwa uye mavara, mafrescoes akachengetedzwa zvakanaka, uye iwe unogona kushandisa nyore zuva rese kuyemura zvinoitika.
Maitiro Ekuenda Kune Iyo Sistine Chapel Kubva kuRoma?
Sistine Chaple iri muVatican City, kunze kweRoma. saka, kana iwe uri kushanya kubva kuMilan, Florence kana imwe nzvimbo kuEurope, iwe unofanirwa kutanga watora a soro-nokukurumidza chitima kuRoma. ndokubva, tora chitima kubva kuRoma Tiburtina kuenda kuRoma St.. Pietro chiteshi, uye zviri 14 maminetsi ndichifamba kuenda kuSistine Chapel.
Kubva kuBudapest kana kuVienna, hazvina kumbove zviri nyore kuenda kuCharles Bridge kubva chero nguva muEurope. Izvo hazvishamise, tichifunga nezve chokwadi chekuti Charles Bridge muPrague ndeimwe yeakakurumbira masitendi ekushanyira nechitima. Iyo gothic ibwe bhiriji, yakanyungudutswa, nzvimbo yepakati pakati peMala Strana neguta rekare, ingori mashoma ezvikonzero zvekubwinya kwayo.
Uyezve, Charles Bridge nderimwe remabhiriji akanakisa uye ekare muEurope. saka, iwe uchasangana nemazana evashanyi vachitsvaga zvakanakisa Instagram pic nzvimbo paBridge. Ehe, chero nguva yezuva negore, iwe unenge uri kujoina vashanyi vazhinji muPrague kuyemura imwe yenzvimbo dzinozivikanwa kwazvo pasirese.
Ungasvika Sei Kuna Charles Bridge Nezvitima?
chitima kufamba muEurope yakasununguka uye inokurumidza, saka unogona kuenda kuCharles Bridge kubva kune chero nyika dzakavakidzana. Kubva kuchiteshi chechitima chikuru (Mumutauro wemuno: Central Chiteshi), ndezve 13 maminetsi metro kuCharles Bridge. Iwe unogona zvakare kusvika ipapo netsoka, chiri 25 maminetsi kufamba kuenda kuCharles Bridge kubva kuchiteshi chechitima, asi zvishoma zvinokurudzirwa kana uri kusvika kubva kuDresden, Budapest, kana Zermatt.
5. Akakurumbira Makiaki Ekushanyira Nechitima: St. Basil's Cathedral yeMoscow
Imwe yeakanyanya zvinoshamisa nzvimbo munyika, Red Square muMoscow inogara kuchechi inoyevedza zvikuru. St. Basil's Cathedral inoshamisa, ne 6 machechi, zvakanaka uye nehunyanzvi pendi mumajometri mapatani. Kereke huru inoyevedza inoyevedza uye mukati, nedzimba dzese dzechitendero dzakashongedzwa nemifananidzo uye pendi.
St. Basil's Cathedral ndeimwe yemifananidzo yepamusoro yeMoscow uye yakavakwa semucherechedzo wekukunda kukundwa kwaTrustible Ivan, iye Khan weKazan. saka, kubva 1561 iri kukwezva mamirioni evashanyi gore rega rega kuti vaone 1 yezviratidzo zvinoorora kwazvo muRussia.
Ungasvika Sei kuSt. Basil's Cathedral?
Holy Basil's Cathedral iri muRed Square iri, uye iwe unogona kutora iyo yepasi pevhu kubva kuLeningradsky chiteshi kuenda kuOkhotny Ryad. Kana iwe uchida kuona zvakanakisa zveRussia, ipapo chitima-chinomhanya kubva kuSt. Petersburg ndiyo nzira yakanaka yekufamba.
6. Peterhof Muzinda muSt. Petersburg
Russian Versailles yakavakwa naPeter Mukuru senyika yake chivakwa. Pane yako rwendo kuenda kuPeterhof Palace, iwe unoshanyira Lower Park, Kumusoro Bindu, Gungwa Chiteshi, nedzimba diki diki mbiri dzamadzimambo – Monplaisir uye iyo Marli Palace. Peter the Great anoshanyira Versailles muma1770s uye akaona iyo yeFrance yekupurinda mune imwe yeanonyanya kuzivikanwa mira muRussia nhasi.
Muzinda weTsar unonyanya kuzivikanwa nekuda kwematsime, Nzizi huru, zvifananidzo zvebhaibheri, nemapindu. MaGerman akaparadza imba inoyevedza muWWII asi vakabudirira kuigadzirisa kuti ive UNESCO nhaka nyika nzvimbo.
Maitiro Ekuenda Kuna Peterhof?
Peterhof palace ndeimwe yenzvimbo dzepamusoro dzekushanyira muSt. Petersburg. Unogona kuenda kuPeterhof nechitima kubva kuBaltiskiy Station kuenda kuNoviy Peterhof Station.
7. Akakurumbira Makiaki Ekushanyira Nechitima: Iyo yeColosseum Roma
Iyo colosseum ndechimwe chezvishamiso zvinomwe zvemunyika yanhasi, saka, zvakanakisa kushanyira iyo Colosseum nerwendo rwakatungamirwa. zvimwe, ari nhoroondo yese yakapfuma zvekuvaka kukuru uku ucharasikirwa kwako. Vatongi veFlavia vakavaka iyi inyanzvi seamphitheatre, nepfungwa yekudzivirira mhomho kubva kumvura nemhepo, mupfungwa.
Nhasi unogona kushanyira ese matanho eColosseum, kana kuyemura kubva kumaresitorendi mazhinji uye maresitorendi ari padyo. Pamusoro pe, hombe colosseum yakambovakwa, inoshandiswa nhasi se rarama mimhanzi makonzati. pano, iwe uchaona mazita makuru kwazvo mumhanzi wenyika, vakadai saElton John.
Maitiro Ekuenda KuColosseum?
Unogona kusvika kuColosseum kubva kunhandare mbiri muRoma, nechitima. Kune zvitima zvinosiya zvese 15 maminitsi kuenda kuchiteshi cheTiburtina, uyezve nemetro yakananga kune ino chiratidzo cheItaly. Zviri pachena, zviri nyore kwazvo kusvika kuColosseum kubva kunzvimbo inozivikanwa muRome.
8. Akakurumbira Makiaki Ekushanyira Nechitima: Westminster Palace MuLondon
Chinonyanya kuzivikanwa muEngland i Westminster Palace neBig Ben Tower. Dzimba dzeParamende. Victoria Tower neshongwe ine mukurumbira pasi rese, Big Ben, vanoumba chiratidzo chakakurumbira muEngland.
Yakatarisana neRwizi Thames, neLondon Eye kukwezva padyo, mamiriro akatenderedza Westminster Palace akanaka kwazvo. Kune anoshamisa panoramic maonero, shanyira London Ziso gore rese, nekuti mukova weWestminster unogoneka chete neMugovera, munaJuly naAugust.
Nzira Yekusvika KuWestminster Palace NaBig Ben?
Tora denderedzwa chubhu mutsetse kuenda kuWestminster kana zviteshi zveTrafalgar. Kana iwe uri kusvika kubva kuLondon suburbs, chero kupi muUK kana Europe, ipapo South Western Railway ndiyo ichave nzira yakanakisa yekufamba.
9. Guta Risina Kurambidzwa China
Mumwoyo weBeijing, iwe uchawana mukova weiyo huru imba yeumambo munyika. Yakakura kudarika Peterhof, iyo Louvre, Kremlin, uye Vatican, iyo Yakarambidzwa Guta Palace ine 980 zvivakwa zvemuzinda kuongorora. Kupesana nemamwe mamaki epasirese, iyi yese yakagadzirwa nematanda. ne 25 Vatongi veChinese vaigara mumuzinda munguva yakapfuura, iro Rakarambidzwa Guta ndiyo miziyamu hombe pasi rose.
Chinoshamisa chinoshamisa chakawana zita rayo kunyangwe nanhasi. Izvi zvinokonzerwa nenyaya yekuti 40% yemuzinda ichiri kurambidzwa kune vashanyi. zvisinei, iwe uchiri kugona kuona iyo yakaoma yese kubva pamusoro pegomo muJingshan Park. Guta rakarambidzwa rinogona kunge risiri iro akanyanya kupenya uye akanaka madzimba muEurope, asi chinonyanya kufadza.
Ndoenda Sei Kuguta Rirambidzwa?
Shanghai kuBeijing iri pamusoro 5 maawa nechitima, asi muBeijing, unogona kutora metro kuGuta Risina Kurambidzwa.
10. Akakurumbira Makiaki Ekushanyira Nechitima: Gomo reBrandenburg Berlin
Gedhi reBrandenburg ndiyo inonyanya kukosha yeBerlin, sezvo chiri mucherechedzo we Iron Curtain uye yakambopatsanurwa Berlin. Gedhi rakatanga kuvakwa naMambo wePrussia Frederick William II, muzana ramakore rechi 18. saka, nzira yakanakisa yekudzidza nezvenhoroondo iri kuseri kwechiratidzo ichi, muchidimbu uye uchisangana nevamwe vafambi, iri nerwendo rwekufamba rwakatungamirwa.
Mumasikati uye pakupera kwevhiki, iyo Pariser Platz inova danho revazhinji vemuno maartist nevaimbi. Iwe unogona zvakare kupupurira veko mabhasikoro kuburikidza negedhi uye kungogara, vachitaura, kumirira mwaranzi yezuva kuti utarise nekugedhi.
Ndinosvika Sei KuBrandenburg Gate?
Nzira yakanyanya nyore yekufamba kuenda kuBrandenburg Gate ndeyeS-Bahn mitsara, iyo yepasi pevhu system. Tora chero tambo inoenda kuBrandenburger Tor chiteshi.
Kupedza, nzvimbo, nhoroondo yakakosha, akitekicha, uye kukura kwezvakawanda zvezviratidzo izvi zvinokwezva mamirioni evashanyi gore rega rega. Sezvaunomira pamberi pega pega chiratidzo, mu Europe, Rashiya, kana China, iwe unongoshamiswa nerunako uye kugadzirwa kwenzvimbo yega yega.
pano pa Save A Train, tichafara kukubatsira kuronga imwe yeiyi 10 inonyanya kuzivikanwa zviratidzo munyika nepasi.
Unoda here kupinza yedu blog positi "10 Akakurumbira Zvivakwa Zvekushanyira Nechitima" kune yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Fmost-famous-landmarks-visit-rail%2F - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / of kuti kana / uye mitauro / ja zvakawanda.
FamousLandmarks Landmarks mostfamouslandmarksineurope Train Travel travelbytrain
5 Of The Best Shopping nehoro In Europe
Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba UK, Travel Europe